Dhageeyso,,Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u direy ciidanka xooga dalka soomaaliyeed. – Radio Baidoa
Dhageeyso,,Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u direy ciidanka xooga dalka soomaaliyeed.
By Webmaster	 On Apr 12, 2020
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay saraakiisha, saraakiil-xigeennada, aliflayda, dableyda, dhammaan qeybaha kala duwan ee Ciidanka Xoogga Dalka iyo qoysaskooda 60-guurada kasoo wareegtay aasaaskii Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidan awood iyo tayo leh ay muhiimad weyn u leeyihiin qarannimadeenna iyo dib u soo nooleynta dowladnimada dalkeenna, sidaas darteedna dowladdu ay qaadday tallaabo muuqata oo ku aaddan tirokoobka, xaqsiinta iyo dib u habeynta Ciidamada Qalabka Sida, gaar ahaan Milatariga.
wax uuna sidookale madaxweynaha Alle uga baryey dhammaan halyeeyadii Ciidanka Xoogga Dalka ee naftooda u huray amniga, nabadda, Qarannimada iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed.
12-ka Bisha April oo ku asteysan 60-guuradii kasoo wareegtay maalimtii la Aas’aasay Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa Xilligaan oo kale meelo badan oo kamid ah dalka lagu qaban jirey munaasabado loogu dabaal-degayo Aas’aaska Ciidanka xoogga dalka,hayeeshee sanadkaan aan la qabaneyn sababo la xiriira ka hortaga Cudurka Coronavirus.
Dhageeyso,,Taliyaha Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ciidanka xooga uga hambaliyeeyey 60-Guuradii kasoo wareegtay Aas’Aaska Ciidanka xoogga dalka
Dhageeyso,,Dowlada oo soo saartey digniin ku socota gancsatada soomaaliyeed.
Golaha Wasiirrada Oo Meel Mariyay Istaraatiijiyadda La Dagaallanka Musuqmaasuqa Ee…
Tirada Dadka uu ku dhacay Covid 19 ee Soomaaliya oo gaaray 2,204
Deni oo Magacaabis sameeyay